Isixha sephepha se-Kraft sisekelwe ephepheni lezinkuni, umbala uhlukaniswe waba yiphepha elimhlophe le-kraft nephepha le-kraft eliphuzi, lingasebenzisa impahla ye-PP ephepheni ngongqimba lwefilimu, umphumela ongangeni manzi, amandla esikhwama angenziwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende izingqimba eziyisithupha, ukuphrinta nokuhlanganiswa kwesikhwama. Op ...
Zonke izenzo zeHongbang zigcwele isivuno. Embukisweni wamazwe omhlaba e-Indonesia, uHongbang waphinde waphuma. Kwakuyimpumelelo ephelele futhi kwaxoxwa nabo ohlelweni lwe-TV lwendawo. Kulo mbukiso, siphinde sibonise umoya weHongbang - ubunye, okuhle, okuqinile ...
Hong Kong International Ukuphrinta futhi Packaging Isentha
Umbukiso wesikhombisa Wokuphrinta nokuPakisha waseHong Kong Womhlaba uyipulatifomu yebhizinisi ehloniphekile futhi engajwayelekile eyenzelwe indawo eyodwa embonini. Sekube ibhuloho elibalulekile nehabhu elixhumanisa abahlinzeki benkonzo yokuphrinta nokupakisha nabakhiqizi bomhlaba jikelele, umhlinzeki wesevisi ...